UYILO LWAMANQAKU AMANZI AMA-57 EGADI - IINDAWO ZOKUPHILA NGAPHANDLE
Eyona iindawo Zokuphila Ngaphandle Uyilo lwamaNqaku aManzi ama-57 eGadi
Uyilo lwamaNqaku aManzi ama-57 eGadi
Ukongeza inqaku lamanzi eyadini yakho yindlela entle yokongeza umnxeba wobuhle noxolo kwisithuba sakho. Uyilo lweempawu zamanzi egadi lunokonyusa isibheno sendlela ekhayeni lakho, ukunciphisa ungcoliseko lwengxolo kunye nokuphucula umgangatho womoya. Ukuba ufuna ukudibanisa isiphumo sokuthomalalisa nokupholisa kwamanzi egadini yakho jonga enye yeempawu ezintathu ezisisiseko zamanzi: ichibi, umthombo okanye ingxangxasi.
Inqaku lamanzi eliboniswe kulo mfanekiso ungentla lilitha elikhulu lesangqa lesangqa elinokukhanya okungaphantsi kwamanzi kwidrama eyongezelelweyo kunye nendlela yokuhamba ngaphezu kwamanzi ukuze ufumane amava. Le ndlela yokuhamba isebenza njengebhulorho eya kwiindawo ezahlukeneyo zegadi kwaye isebenzisa ukubiyela ngentsimbi kunye neeplanga zomthi ezinemiqolo ethe tyaba.
Iindleko avareji iikeyiki zomtshato
Iimpawu zamanzi angasemva
Iingcamango ezincinci zamachibi
Nazi iindidi ezithandwayo zasemva kwendlu kunye neglasi yamanzi ayila izinto ezifumaneka ngokuxhaphakileyo:
Amachibi Amachibi amancinci anokusebenza njengeziqwenga kwigadi engaphambi okanye nangaphakathi ekhaya. Amachibi amakhulu alunge ngakumbi kwigadi yangasemva okanye kwenye indawo enika ukhuseleko ukubonisa ubumfihlo. Amachibi anokungqubeka kwaye ajongeke ngokwendalo okanye ayilwe ngokwejiyometri. Amatye okuhombisa echibini angongezwa ukongeza imibala oyifunayo kunye nokuphucula ubuhle bendawo. Idama legadi elenziweyo elenzelwe ngokwesiqhelo liwela phantsi kolunye lweendidi ezintathu: ezibonisa amachibi, amachibi okuhombisa, kunye negadi yamanzi.
Amachibi abonakalisayo asemthethweni, amachibi amileyo ejiyometri aneendawo zokuhamba ezenziwe ngetayile okanye ngamatye emida echibini. Njengoko igama libonisa, la madama ayilelwe ukubamba azolile, amanzi acocekileyo anokubonisa imeko engqongileyo. Amachibi okuhombisa yimizimba emincinci yamanzi eyilelwe ukujikeleza isiqwenga somhombiso esifana nomfanekiso oqingqiweyo. Ezi zinokusebenza ngokubambisana nezinye izinto zamanzi ezinje ngomthombo okanye ingxangxasi.
Igadi yamanzi lolona cwecwe lukhulu lwamachibi angengowamvelo, asebenza njengesiqhelo sendalo yamanzi. Ngenxa yoku, igadi yamanzi lelona chibi linzima kakhulu kwigadi njengoko kufuneka uqiniseke ukuba ichibi liyakwazi ukuxhasa izinto eziphilayo ozibeke kulo. Isitiya samanzi sihlala sinezityalo zasemanzini kunye nezisemanzini ezihlala ngaphakathi nangaphandle kweparamitha yedama, nto leyo edala imeko entle yendalo. Izityalo zasemanzini zinobuzaza obunzulu kwaye uninzi lufuna ubunzulu obuthile bamanzi ukuze zikhule ngoko ke kufuneka kuthathelwe ingqalelo ukuqinisekisa ukuba ichibi linzulu ngokwaneleyo.
Abanye abantu bathanda ukongeza iintlanzi zokuhombisa ezinje ngegolide okanye ikhoi ukongeza ukonwaba okunomdla okanye umbala kunye nokuhamba. Kwakhona, kufuneka unonophelo lokuba ichibi ligcine iimeko ezifanelekileyo ukugcina iintlanzi ziphila.
Umthombo - Umthombo sisiqwenga somsebenzi wegadi yakho. Amanzi ahamba emthonjeni kwaye ekugqibeleni akhutshelwa kumjelo ukusuka kwindawo ethile ukuya kwisitya okanye echibini. Inokuba yinto emileyo okanye inokudityaniswa njengenxalenye yedama okanye igadi yamanzi. Imithombo inokuza ngeendlela ezininzi ezahlukeneyo kunye nobukhulu kwaye inokubonisa imifanekiso emininzi eyahlukeneyo. Phantse nawuphi na umfanekiso oqingqiweyo wegadi okanye isiqwenga sokuhombisa sinokuguqulwa sibe ngumthombo.
Iingxangxasi - Ingxangxasi yasemva kwendlu ngokusisiseko ineepuli ezimbini okanye nangaphezulu ezinobude obahlukeneyo apho amanzi ahamba khona. Idama eliphezulu lincinci, lilingene ngokwaneleyo ukuba linokuqulatha amanzi anokuphuphumela echibini elikhulu. Ubuhle bengxangxasi bulele eludongeni phakathi kwamachibi amabini. Olu donga lwenziwe ngamatye endalo okanye awenziwe ngabantu okanye amatye abekwe ngendlela yokuba enze ikhosi apho amanzi anokuhamba khona. Ikhosi enokuthi ithathe ingxangxasi inokuthi ngokuthe ngqo ezantsi okanye umoya ubhudle, ukuhlelwa komhlaba okungeyonyani kuhlala kufakiwe kwaye kunokuba yinxalenye yegadi yamanzi okanye inkqubo yamachibi.
Indawo entle ekhoneni lamanzi eguqula ubume obungaqhelekanga bokulinganisa amachibi avele ngokwendalo. Ezantsi kuqiniswe ngamatye amancinci emilambo ngelixa amacala eneebhloko ezinkulu zamatye, kunye neziqwenga zamatye e-coral afileyo ecaleni ukuze ayinike iintlobo ezahlukeneyo zezinto ezibandakanya izityalo ezijikelezileyo.
Eli nqaku lamanzi likhulu ngokwaneleyo, lijikeleze isiqithi esincinci embindini. Amanzi aphantsi, enza ukuba kubonakale amatye emilambo yendalo. Ilitye elikhulu elixande eliqinileyo lesitye lisebenza njengebhulorho / indlela eya esiqithini esincinci apho ikhokelela kwindlela yomthi eya kwindawo yokuhlala ephezulu ejikelezwe ziiferns, izihlahla nezinye izityalo. Ukwahluka okuhle kwezityalo kunye namatyholo kule gadi kuyenza ibonakale indalo ngakumbi kwaye inovakalelo lwamahlathi emvula ahlelwe kancinci.
Ikhaya lesitayile iMeditera / indawo yokuphumla enendawo ende kakhulu yamanzi ngasemva, ejikeleze phantse ixesha elide njengoyena ndoqo. Ubume obungaqhelekanga bechibi elincinci linxitywe iithayile zamatye, ziyilo kwaye ligxininise kwigadi eyenziwe ngezandla. Izibane ezingaphantsi kwamanzi zikwasetyenziselwa idrama eyongezelelweyo, kunye nokwakhiwa kwamatye amanqanaba amaninzi kunye nesilayidi sebhulorho yamatye.
Olu phawu lwamanzi lisebenzisa ithuba lethambeka lomhlaba kunye nomxhuzulane ukuze kudaleke ukuwa okuncinci okuhambayo. Amanzi adlula kumjelo omxinwa owenziwe ngamacwecwe amatye abalekayo aye kwisitya esikhulu esinethayile emnyama, apho amanzi ajikeleza abuyela kwelona nqanaba liphezulu ngempompo yeemoto. inqaku lamanzi lijikelezwe ngamatye amancinci amancinci, ingca kunye namatyholo, okwenza ukuba ibe yinxalenye yoyilo lwegadi.
Le ndlu ine-atrium enkulu enomlinganiso wamanzi ngokulinganayo-embindini wayo, i-atrium inemigangatho yamatye e-litye yendalo ebaleka de kube lixesha lamanzi amile ngokungaqhelekanga, Amanzi anzulu anemigangatho emnyama kunye nesiqithi esincinci embindini apho kutyalwe umthi omncinci kunye neentyatyambo kunye nengca.
Imizekelo yangaphambili ibonisa iimpawu zamanzi ezifakwe emhlabeni, kodwa lo mzekelo uphakanyiswe ngaphezu komgangatho womhlaba kwaye ujikelezwe ngamatye ukuwubeka kwaye ugcine amanzi kuwo. Unomthombo omncinci ophakathi kwaye ugcina i-koi ephilayo kunye nobomi bezityalo, okwenza oku Ubume bamanzi bobabini bokuhombisa kunye nokusebenza.
Olu phawu lwamanzi ludibanisa ukulula kwendlela ethe tye, ukulingisa isitshixo sokwenyani, kwaye ukudibanisa nezinto ezinomdla ngakumbi njengeejets ezincinci zamanzi eziphuma emthonjeni ophuma esiphelweni ukuya esiphelweni senqaku lamanzi. Ikwanebhulorho encinci edibanisa amacala amabini phakathi kwendlela encinci, kwaye ijikelezwe zityholo ezenziwe kakuhle, yenza umhlaba obukekayo ofanele uyilo.
Isiziba esinzulu esinengxangxasi encinci ephuma kwilitye lelinye icala, le ndawo yamanzi yongeza intshukumo kunye nesandi egadini, isenza siphumle ngakumbi. Umgangatho wedama uneentlobo ezahlukeneyo zamatye ngobukhulu obahlukeneyo, imibala kunye neemilo kwaye ujikelezwe ziintlobo ngeentlobo zamatye omlambo, iiferns kunye nezihlahla. Ibhulorho encinci enesinyithi esinyithiweyo yenza indawo entle yokujonga ichibi kwaye yongeza indawo ekhethekileyo kubume bomhlaba.
Esi sitiya sincinci samanzi sinokudityaniswa okuhle kwamatye kunye nezityalo, kunye nengxangxasi esebenzayo yokugcina amanzi ejikeleza, isenza indawo efanelekileyo yeentlanzi zecoi kunye neenyibiba zamanzi. Ujikelezwe ngamatye ahlukeneyo omlambo, izityalo ezinamanzi kunye nemifanekiso eqingqiweyo, kwaye isandi samanzi ahambayo sinceda ukwenza igadi yokuphumla. Ukongezwa kwesihlalo se-Adirondack kwenza le ndawo ibe yindawo enkulu yokucamngca ngoxolo.
Eli chibi lincinci liluhlobo lwephuli ebonisa iphuli enamanzi amileyo xa kuthelekiswa namanzi ahambayo eempawu zamanzi zangaphambili. Inobume obulula kakhulu be-elliptical enesanti kunye nomgangatho wobumdaka kwaye ibunjiwe ngobukhulu obahlukeneyo bamatye omlambo kunye nezityalo. Umbala omhle oluhlaza okwesibhakabhaka wamanzi wongeza i-pop edlamkileyo eluhlaza okwesibhakabhaka kwigadi eluhlaza.
Olu phawu lwamanzi lufana namanzi akhawulezayo kunye noyilo lwayo, inethambeka elinamanzi abalekayo edlula kuthotho lwamatye omlambo kunye namatye amatye, ebangela ukuba yenze amaqhakuva amhlophe akhumbuza amanzi e-rapids. Ukongeza kwisiphumo, inqaku lamanzi lizingqonge izityalo ezahlukeneyo, izihlahla kunye neentyatyambo ezintle, zenza ukuba ibe ngumfanekiso ogqibeleleyo womyezo.
Uhlobo olubonisa iphuli yedama elandela uyilo oluncinci loyilo loyilo loyilo. Inomgangatho wamanzi oxande wenqanawa oxande ngamanzi amileyo kunye nesamente enemibala kunye neendonga, kunye nokukhanya okungaphantsi kwamanzi ukukugxininisa ngexesha lasebusuku. Embindini kukho isiqithi esikwisikwere esincinci esinomthi wesundu embindini ozotywe ngamatye omthi kunye neethayile zesileyiti.
Olu lolunye uhlobo lwengxangxasi yamanzi echibini, oluncinci ngobukhulu, kwaye lunezihlahla ezincinci kunye neentyatyambo ezijikelezileyo. Yakhelwe ikakhulu ngamatye kwaye ikwanaso nesiseko sedwala sokugcina ukuba ijongeke indalo. Iimpawu zokuhombisa ezinje ngesibane segadi esiphefumlelweyo saseAsia sinika imvakalelo esempuma ngakumbi.
Olu phawu lwamanzi sisiqwenga esiphambili sentsimi yesiFrentshi esisemthethweni. Ngokusisiseko ichibi lokuhombisa elinomthombo wamanzi kwaye linxibelelana nelinye ichibi lokuhombisa elifana neli elikwelinye icala ngendlela yomjelo wamanzi ongena kwingxangxasi encinci, egcina amanzi equkuqela.
Uhlobo lwamanzi olubonisa amanzi lubethwe embindini wegadi entle ebanzi. Inobume obungaqhelekanga bokulinganisa umlambo ngokwendalo, nomgangatho wenziwe ngesanti, ubumdaka kunye namatye ahlukeneyo omlambo. Iyazahlula engceni eyenziwe ngoqweqwe ngamatye echibini kunye neengqalutye, kunye nokudityaniswa kwezityalo ezahlukeneyo kunye neentyatyambo.
Ingxangxasi entle eyenziwe yinyani ngokuyenza ukuba ibe phezulu kuneempompo ezincinci. Yakhiwa kusetyenziswa amatye omlambo abekwe kwithambeka elifanelekileyo ukufikelela kwinkangeleko yengxangxasi yendalo. Ukongeza kwisibheno sayo sokwenyani, imithi ye-bonsai kunye neeferns zatyalwa zijikeleze yona, kunye nezinto zokuhombisa ezongeziweyo zase-oriental, ezenza ukuba zikhangeleke njengendawo yaseJapan.
Idama eliluxande elilula kakhulu elinentlanzi ephilayo kunye nezityalo zamanzi, eli phawu lamanzi lincinci kwaye licacile, liyazixuba kunye nemigangatho yamatye. Asinzulu ngokwaneleyo, ngokwaneleyo ukuba izityalo kunye neentlanzi ze-koi zikhule. Iibhentshi zeenkuni zinika indawo eninzi yokuphumla.
Indawo entle engamanzi engxangxasi esebenza njengeyona nto iphambili egadini. Yakhiwe ngamanqanaba aliqela amatye amakhulu asikwe ethe tye, enza ingxangxasi yemigangatho emininzi. Ujikeleze inqaku lamanzi ziintlobo ngeentlobo zezityalo kunye neentyatyambo, ukongeza ubunzulu ngakumbi kunye nomdla kwiingxangxasi.
Le ngxangxasi yomthombo wamanzi incinci ngobukhulu. Isebenzisa amacwecwe amakhulu amatye anendawo eqingqiweyo apho amanzi ahamba khona, enza ukuhamba kwamanzi okujikelezayo kusetyenziswa impompo yamanzi. Ijikelezwe kancinci zizityalo kunye nezihlahla, kodwa uyilo lwamanzi olunamanqanaba ama-3 lwanele ukutsala umdla kunye nokwenza isandi samanzi esiqhekezayo.
Inqaku elilodwa lamanzi eliphefumlelwe yimifula kunye nemilambo yendalo. Ukudibanisa izinto ezimbini ezikhuthazayo, ivelise indawo enzulu kakhulu yamanzi kunye nebhedi yelitye lomlambo kunye neendonga zesamente / amacala ukugcina amanzi. Ithambeka lendalo lendawo linceda amanzi ukuba aqhubeke ngokuqhubekayo kwisitayile.
Indawo enkulu yamachibi amanzi eyakhiwe kusetyenziswa ikhonkrithi egalelweyo kunye namatye ahlukeneyo omlambo. Isiziba esenziwe ngumntu sinzulu kakhulu, esinokuba lichibi elifanelekileyo ukufuya iintlanzi zekhoi. Umgangatho, iindonga kunye namacala echibi akhiwe ngekhonkrithi ngamatye, kunye neethayile ezisikwe ngokungacwangciswanga ezinokubonwa kwezona ndawo zinzulu zedike.
Esi sisixhobo samanzi esilula samanzi esine-ceramic tile flooring kwaye singqongwe ngamatye amakhulu abomvu ukuze sinike isibheno sendalo ngakumbi. Amachibi aphezulu nangaphezulu enza ukuba kubonakale ngathi yimithombo eshushu yaseJapan. Inobuninzi bezityalo kunye namatyholo ayijikelezileyo, eyenza ukuba idibane nayo yonke igadi.
Umthombo omncinci owenziwe ngamanqanaba amathathu ekhonkrithi ephantse yagqitywa ukwimo yesetyhula kunye nesiphelo esisezantsi apho amanzi ehla esiya kwisitya esisezantsi kwaye aponselwe phezulu phezulu ukuze iqhubeke iqukuqela. Lo mthombo mncinci ulongezo olugqibeleleyo kwigadi encinci, ngaphakathi okanye ngaphandle, njengoko ingathathi ndawo kakhulu.
Lo ngumzekelo wegadi yamanzi ebalaseleyo eyenziwe ngamatye amaninzi kunye namatye amakhulu, ukudala ubunzulu kunye nokuthungwa kwidama. Igcinwa ilula, ingenampompo okanye mthombo wamanzi, kodwa ihlala inomdla obalulekileyo egadini njengoko ivumela izityalo zamanzi ukuba zikhule kwaye zikhule.
eyakhe kunye neempahla zangaphantsi ezibekiweyo
Igadi enkulu entle eneentyatyambo ezahlukeneyo kunye nezityalo ezinamanzi axande abonisa iintyatyambo ezintle eziyingqongileyo. Inendlela evulekileyo yokujikeleza macala onke kunye nemithombo emithathu yoxande kunye neziko layo ukongeza umdla kumanzi. Ikwasebenza njengendawo yokuhlala efanelekileyo yezityalo zasemanzini ukuze zikhule kakuhle.
Le yenye into echibini lempompo ebekwe kwikona enye yegadi. Yakhiwe ngamatye omlambo kunye namatye amanqanaba amanqanaba angama-basalt ukudala i-2 -level effect effect, okwenza le nto yamanzi ibe yongezwa ngokufanelekileyo kuyo nayiphi na igadi. Izungeze ngeeferns ezahlukeneyo kunye nezityalo, kunye nemiyhombiso yeflamingo eqingqiweyo yokongeza umdlalo kunye nomdla.
Uyilo lwamanzi egadi yoyilo olunje malunga nokuzonwabisa. Umgangatho omncinci womthi ubekwe ecaleni kwegadi yamanzi enee-koi eziphilayo kunye nezityalo zasemanzini. Umgangatho uxhonywe kwinxalenye yegadi yamanzi, uyenza indawo efanelekileyo yokuphumla kwaye ujonge iintlanzi. Kunzulu ngokwaneleyo ukuba iintlanzi zikhule kwaye zibiyelwe ngeebhloko zamatye.
Le gadi igangathiweyo ikhupha umthombo omncinci ngaphakathi kwezityalo kunye neentyatyambo. Kwikona esecaleni kwendawo yokuphumla, uya kuqaphela umthombo owenziwe ngekhonkrithi kunye neethayile zemibala kunye nekhethini lamanzi elibaleka liphume. Yandisa ukubonakala kwegadi, yongeza isiqwenga esinomdla phakathi kwendawo eluhlaza yendalo.
Uhlobo lwechibi elisebenzisanayo, eli phawu lamanzi linendlela yelitye embindini wamanzi ekhokelela kwelinye icala legadi / iphuli. Amanzi enziwe nje ngekhonkrithi egalelwe iziqwenga zamatye omlambo afakwe kuwo, amacala enziwe ngamatye amakhulu. Umendo ziingceba ezinkulu zebasalt ziisentimitha ezimbalwa ukuphakama kunamanzi. Amanzi aphantsi ngokwaneleyo, enza ukuba emazantsi agcwele ubulembu.
Esi sitiya samanzi siba yindawo ephambili yale gadi icwangciswe kakuhle, ibekwe embindini wengca kwaye yenziwe ngeebhloko ezinkulu zamatye. Kukho indawo encinci eyenziwe ngomthi kwelinye icala yokujonga eyenziwe ngokhuni oluqinisekiswe yimozulu, ejonge iinyibiba zamanzi ezikhula echibini.
Lo ngumthombo wamanzi olula olula ngokuthe nkqo kunye nemilo emxinwa emile engxande eyenziwe ngamatye aqingqiweyo kwaye inoluhlu lwemithombo yokutshiza emthonjeni embindini. Oku kungqongwe ngumbhede weentyatyambo kwaye kunesibane esingaphantsi kwamanzi ngesiphumo esongezelelweyo ngakumbi ebusuku.
Igadi yeentyatyambo entle enebhedi ezilungelelanisiweyo zeentyatyambo ezingqongwe ziingca ezenziwe kakuhle kunye nemithi, inendawo enomdla yamanzi eyahlula igadi. Iphefumlelwe yimijelo yamanzi, iindonga zayo zazinemathiriyeli yePVC ukuyibeka kwisakhelo, ukuyigxininisa engceni. Ijelo alilunganga, kodwa endaweni yoko lihlengahlengisa ipateni egobileyo, lenze into enomdla egadini.
Esi sitiya samanzi sihle nje simi ecaleni kwepatio enophahla olunophahla lwe-trellis. Umgangatho ophakamileyo unembono entle yegadi encinci enamanzi amancinci enziwe ngamatye emilambo amakhulu. Ujikeleze inqaku lamanzi zizityalo ezahlukeneyo kunye nengca, okwenza umgxobhozo omncinci ecaleni komgangatho.
Indawo enkulu kunye nengxangxasi yempompo ebonakalayo ngokucacileyo kwaye isebenza njengeyona nto kugxilwe kuyo egadini. Inika iingxangxasi ezimbini zekhethini kunye nomthombo wamanzi ophakathi phezulu. Yakhiwa kwinduli / ithambeka elincinci kusetyenziswa indibanisela yamatye omlambo kunye nesileyiti esisicaba okanye amatye echibini le-basalt ukwenza amanzi endalo, awela kwisitya esikhulu / echibini lamanzi. Ujikeleze inqaku lamanzi ziibhedi zeentyatyambo eziqokelelwe ngokombala wazo, zenza uyilo oluhle lomhlaba.
Ngokufana nomnye wemizekelo yangaphambili yeempawu zamanzi engxangxasi, olu phawu lwamanzi lwalwakhiwe kwithambeka elingumnqantsa, lusebenzisa amandla omxhuzulane ukwenza ingxangxasi enomdla. Sebenzisa amatye emilambo emikhulu ahlanganisiweyo kunye neebhloko ze-basalt, iingxangxasi zamanzi zamanqanaba amaninzi zenziwa apho iiferns ezahlukeneyo kunye nemiboniso yebhonsai yatyalwa yajikeleza ukuba ibonakale njengeengxangxasi.
Ejikelezwe ngamatyholo kunye nengca, le nto incinci yamanzi isebenza njengotshintsho oluhlaziyayo kwizityalo ezilungiswe kakuhle kunye nefom yayo engaqhelekanga. Yenziwe ngamatye esileyiti, yenza inqanaba lamanzi elinamakhethini elingena kwinqanaba elineentlanzi ze-koi kunye nezityalo zasemanzini.
imihombiso elula yecawa yomtshato
Le ngxangxasi intle izifihla phakathi kweentyatyambo nezityalo ezahlukahlukeneyo. Amanqanaba amabini engxangxasi ebonakala ngathi ayaphuma kwizityalo njengoko amagqabi ajikelezileyo efihla imvelaphi yamanzi. Isixa esikhulu sesityalo esingqonge inqaku lamanzi sinceda ukuba sibenomtsalane ongaqondakaliyo.
Igadi encinci yamanzi sisongezo esamkelekileyo kuyo nayiphi na indawo yangasemva. Umzekelo, wenziwe ngezinto ezilula, njengesiqwenga samatye ukwenza isakhelo sedama kunye nengxangxasi encinci eyenziwe ngamatye. Ngokujikeleze ichibi ngamatye aqingqwe kunye nekhonkrithi, enza indlela egudileyo yokuma okanye ujonge echibini elincinci.
Indawo enkulu yamanzi eengxangxasi enamanzi amaninzi eyenziwe ngamatye esilayidi amnyama ahlengahlengisiweyo. Kwakungekho khonkrithi isetyenzisiweyo ukwakha oku kwaye ixhomekeke kuphela kumxhuzulane kunye nobunzima belitye ngalinye lokuzibamba. Amatye e-slate asetyenzisiweyo agqibelele ekudaleni ithambeka lamanzi.
Le patio ivulekileyo inegadi emnandi esasazeke ngamatye ahlukeneyo kunye neendlela zamatye ezinesiqwenga esikhulu samanzi. Yenziwe ngolwakhiwo olukhulu nolwandayo lwamatye endalo abekwe kwithambeka, evelisa iingxangxasi zamanqanaba amaninzi. Ikwangqongwe ziifern kunye nezinye izityalo, nto leyo eyenza ukuba ibe sisongezo esihle kumyezo wezityalo ezimnandi.
Yenziwe ukuba ibe yinto enomdla eyongezelelweyo yegadi, ezi ngxangxasi zenziwe ngokudibanisa amatye esileyiti kunye namatye endalo omlambo. Isileyiti sasisetyenziswa njengesakhelo esiphambili senqaku lamanzi, sizidibanisa ukwenza udonga kunye nokuthambeka okufihla umbhobho ojikeleza amanzi. Amaqhekeza ama-2 amakhulu emilambo asebenza njengeengxangxasi ezenza ikhethini lamanzi eliqengqelekayo elihla lingene ebhedini lamatye omlambo.
Ngamanye amaxesha, awudingi ukuhamba kwamanzi ngokungxama ukudala indawo yokuphumla engadini yakho kwaye ukuhla kwamanzi rhoqo kuya kwanela ukwenza uvakalelo lwe-zen kumyezo wakho. Lo mzekelo uphefumlelwe yigadi yaseJapan isōzu, uhlobo lomthombo wamanzi owenziwe ngoqalo ngombhobho ojikelezayo owawusetyenziswa ngokwesiko ukoyikisa amagwababa kunye nezinye izilwanyana kude negadi. Lo mahluko, nangona kunjalo, awunayo ityhubhu ejikelezayo, kodwa ispout esilungisiweyo esenziwe ngoqalo esihlala sinyuka siye kungena echibini elingqukuva saza saphinda saphontshwa sibuyelela kwispout ukuze sijikeleze.
Umthombo wamanzi olula onokuwubeka kuyo nayiphi na igadi okanye iyadi encinci engaphambili. Le yenziwe ngelitye kunye neencopho ezikroliweyo, ezenza ispout apho amanzi ahamba khona. Amanzi aqukuqelayo evela kwisikali esikwinqanaba le-3 awela kwisitya esikhulu selitye kwaye impompo yenyuka ukuya phezulu ukugcina amanzi egeleza.
Olunye uyilo lomthombo wamanzi olunomdla olwenziwe ngokusuka kwimithi yemithi endala ngeentambo zomququ, kunye neziqwenga ezi-3 zejogra zamanzi ezincinane. Ezi jagi zamanzi zibekwe ngaphezulu kweengodo ezilinganisiweyo, kwaye amanzi aqukuqela esuka kwenye ingqayi eya kwenye ngokuvula okuqhekekileyo ngaphezulu kweengqayi ezisezantsi. Oku kulungele abo bangafuni ukugcina indawo enkulu yamanzi egadini yabo, kodwa bafuna ukuba nenxalenye yamanzi ehambayo.
Le yinguqulelo enkulu yemithombo emincinci yamanzi eyenziwe nge-basalt esikiweyo evela kule mizekelo ingentla. Lo usebenzisa ilitye elinzulu kodwa libanzi ngakumbi elinomphezulu osikiweyo nomphezulu apho amanzi ehla khona. Endaweni yokuba ngumthombo wamanzi ozimeleyo, lo udityaniswa nembonakalo yomhlaba njengolunye uhlobo lweempawu zamanzi.
Olu phawu lwamanzi ludibanisa izinto ezahlukeneyo ukwenza oku kujongeka. Okokuqala, ine-spout yomthombo ephuma eludongeni efakwe kwi-mosaic / ngezitena zamatye. Amanzi aphuma kwisipopu sodongwe esimile esifana necorbel kwaye emva koko sibanjwa ngumthombo omile okwe-urn umi embindini wedama. Amanzi ajikelezwa ngokuqhubekayo ngesiporho sodonga kunye nomthombo wamanzi.
Ukulinganisa umlambo ngokwendalo, eli nqaku lamanzi lidibanisa iintlobo ezahlukeneyo zamatye ngeendlela ezahlukeneyo kunye nobukhulu obahlukeneyo. Umbhede wedama unamatye amancinci amancinci kunye namatye amakhulu nje ngomlambo wokwenene kwaye ujikelezwe ziintlobo ezahlukeneyo zamatye ngeendlela ezahlukeneyo kunye nobukhulu obahlukeneyo. Iingxangxasi zamakhethini ziveliswa ngamatye amakhulu amabini amatye kunye nebhedi yezityalo kunye namatyholo ajikeleze olu phawu lwamanzi ukuze lubonakale luluhlobo lwendalo.
Esi sisixhobo esincinci segadi yamanzi esenziwe ngokusebenzisa ikhonkrithi egalelweyo njengechibi ledama elime ngendlela engaqhelekanga. Ukuze ibukeke indalo ngakumbi, iziqwenga zamatye zazibekwa phezu kwesamente, kwaye iintlobo ngeentlobo zezityalo, ingca kunye neentyatyambo zikhula zijikeleze loo nto, ziwujikelezile.
Eli chibi lincinci ecaleni kwendlu likhangeleka ngathi belisoloko likhona kwaye alizange lenziwe ngesandla, njengoko lidibana ngokugqibeleleyo nendalo elijikelezileyo kwaye linobume bendalo, obungaqhelekanga. Enye into eyenza ukuba ibonakale indalo kukungakhuli kakuhle kwengca, iifeni kunye nezinye izityalo ezingqonge ichibi. Kuya kuba kuhle kakhulu ukugcina iintlanzi zekhoi okanye ukukhula kwezityalo zasemanzini.
Uthotho lwamaplanga omthi enziwe ngomthi oqinileyo we-teak emi ngaphezulu kwephuli ebonakalayo, apho izibonda ezixhasa ukutyibilika kwayo zigutyungelwa ngamatye omlambo amhlophe. Amanzi anzulu kwaye anamatye amancinci asezantsi. Inqaku lamanzi lidala umlinganiswa onomdla kwiidesika kwaye longeza isiphumo esibalulekileyo ikakhulu ebusuku njengoko ukubonakaliswa kwamanzi bekuya kuseta ubume obungaqondakaliyo nothando.
Isitiya esikhulu samanzi setyhula, senziwe ngamatye amakhulu kunye neendidi zezityalo. Izityalo zasemanzini kunye neenyibiba zamanzi zinokubonwa zichuma kweli chibi, kwaye imifanekiso yokuhombisa enefuthe lakudala nayo inokubonwa ngeenxa zonke kuyo.
Uyilo lweempawu zamanzi alunazo iingxangxasi okanye imithombo yokugcina amanzi, kodwa endaweni yoko kugxilwe kukuzola kwamanzi alo ukubonisa yonke igadi, kudala isibheno esimangalisayo. Ukusetyenziswa kobunzulu bamanzi kunika inqaku lamanzi ubomi obungakumbi, kwaye indlela ecwangcisiweyo yezityalo kunye nezihlahla ezikhula zijikeleze ichibi zikwanceda ukwenza indawo enjenge-zen.
indlela yokubopha isaphetha esikhulu
Ngokungafaniyo noyilo lwamanzi angaphambili egadi, lo mzekelo ufana nomzimba wamanzi ngenxa yendawo kunye nobukhulu bayo. Ibaleka ecaleni kwendlu / kulwakhiwo kwaye ingaphantsi kwethambeka, iyenza ibonakale indalo. Ibhulorho eyenziwe ngomthi emhlophe / indlela yokuhamba ehamba emanzini kwaye ikhokelela ekungeneni kwekhaya. Uyilo lwamanzi egadi yoyilo olufana nokukuhambisa kwenye indawo kunye nokwenza imeko enomdla yeendwendwe.
Nanku omnye umfanekiso wokungena kweli khaya ophefumlelweyo ngumsele wamanzi wamanzi. Eli phawu lamanzi lijikeleza icala lesakhiwo, lisahlula kwelinye icala leqashiso, lenza umsele omncinci apho kwakhiwa ibhulorho yomthi ngaphezulu. Ibhulorho yamaplanga ikhokelela ekungeneni kwesakhiwo kwaye ijonge indawo yamanzi, ngokukhanyisa okudala amava adibeneyo kulundwendwe.
Le ndawo inkulu yokuthengisa amachibi iya kuba yimibala yayo eluhlaza okwesibhakabhaka eqaqambileyo ebonisa ubuhle be-rotundas gazebo kwelinye icala. Ijikelezwe yindlela enamatye esamente kunye namanye amatye omlambo akhululekileyo emacaleni, ngelixa ibhedi ephambili yedama igcinwe icwebe ngombala oluhlaza okwesibhakabhaka emazantsi ukwenza ukuba amanzi abonakalise luhlaza okwesibhakabhaka / luhlaza ngokunjalo.
Olu phawu lwamanzi ludibanisa iindlela ezahlukeneyo zokwenza oku kujongeka. Inomthombo omkhulu wamachibi kunye nebhedi eyenziwe ngamatye omlambo anzulu ngokwaneleyo ukuba iintlanzi ze-koi zikhule. Ikwanayo nenqanaba lamanzi elinemigangatho emininzi elenziwe ngamatye esilayidi apho umthombo wamanzi uyisipout esenziwe ngoqalo oluhamba luye kwivazi yeterracotta. Ikwayimixholo eyahlukeneyo ephefumlelweyo esempuma, kunye nevatala encinci yomthi yoyilo.
Iingcamango ezingama-65 zePatio Design - Iingcamango ezingama-50 zeDisk Design - Iingcamango zangaphandle zomlilo - Uyilo lweGazebo ezingama-35 - Amachibi okudada aManzi - Iingxangxasi zegadi engasemva
iingoma zomtshato zomtshakazi nomyeni
iingoma zothando ezimnandi zomtshato